Montenegro zom-pirenenan'i Durmitor Hotel & Villas
Fampiasam-bola amin'ny hôtely + zom-pirenenan'i Montenegro
Ao afovoan'ny valan-javaboary tsara tarehy indrindra any Montenegro, ny valan-javaboary Durmitor, akaikin'ny Black Lake (Crno Jezero),
Durmitor Hotel & Villas dia nanomboka nanangana toeram-pialofana manokana misy ny Durmitor Hotel sy ny manodidina azy.
Ny trano fandraisam-bahiny Durmitor vaovao no ho hotely kintana 5 voalohany ao Zabljak, izay hameno ny tolotra fizahan-tany any amin'ireo faritra be tendrombohitra.
Ny ivelan'ny trano fandraisam-bahiny dia hitovy amin'ny hotely Durmitor taloha, izay tandindon'ny fizahan-tany an-tendrombohitra ao Montenegro.
nanomboka tamin'ny 1939, ary noho izany dia hanolotra ireo mpitsidika azy ny rivo-piainana marina, ary koa ny fahasarotana sy ny fiononana.
Ny trano fandraisam-bahiny dia hanana trano mirary 55, trano fisakafoanana 2, tobim-pahasalamana sy spa, dobo anaty sy ivelany, efitrano filalaovana ho an'ny ankizy, efitrano fivoriana ary efitrano fihaonambe.
Ary eo akaikin'ny trano fandraisam-bahiny akaiky dia haorina villa tendrombohitra 13, izay hamirapiratra koa amin'ny famirapiratan'ny kintana 5.
Ny mahasarika tokana ny toeram-pialofana dia ny toerana misy azy, izay fantatra amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary tsy mahazatra izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
Ireo mpitsidika ity toeram-pitsangatsanganana ity dia hahita ny toerana mety amin'ny fanaovana traikefa an-tendrombohitra, fa raha te hiala sasatra izy ireo, dia ho eo amin'ny toerana mety ihany koa izy ireo hiala amin'ny korontana sy ny fiainana andavanandro, miala sasatra amin'ny fiainana haingana ary mankafy ny fandriampahalemana sy ny fahanginan'ny natiora.
FIZARANA OF LOCATION
Durmitor Hotel dia eo avaratry Montenegro ao an-tanànan'i Zabljak (tanàna misy haavo avo indrindra any Balkans, amin'ny haavo 1450 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina) ary manodidina ny folo minitra miala ny farihy tsara tarehy indrindra ao
Valan-javaboary Durmitor - Farihy Mainty (Crno Jezero).
Ny lalana E65 no lalana mampitohy an'i Zabljak sy ny sisa amin'i Montenegro ary io no làlana lehibe mampitohy ny morontsirak'i Montenegrin, Podgorica ary ny avaratra.
Fifandraisana manan-danja iray hafa dia ny làlana mamaky an'i Shavnik sy Niksic mankany Risan na Podgorica.
Manana seranam-piaramanidina (tanàna seranam-piaramanidina Zabljak) ihany koa ny tanàna, fa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena akaiky indrindra dia:
Seranam-piaramanidina Podgorica dia 130 km miala. Misy sidina mahazatra avy amin'ity seranam-piara-manidina eran'i Eropa ity.
Seranam-piaramanidina Tivat no seranam-piaramanidina faharoa akaiky indrindra ary 170 km miala - adiny telo sy sasany amin'ny fiara.
Ny programa dia natao mandritra ny 3 taona, miaraka amin'ireo mpangataka 2000 no kasaina hatao.
Raha heverina fa fampiasam-bola any avaratry ny firenena ny fananganana ny Hotel Durmitor sy ireo villa manodidina dia takiana amin'ny governemanta ny fandoavam-bola.
ny sandan'ny 100 000 euro ho an'ny fampandrosoana + fampiasam-bola 250 euro (ao anatin'ny vidiny dia misy ny VAT).
Ankoatr'izay, ny mpangataka dia tsy maintsy mandoa:
15000 euro ho an'ny fangatahana manokana,
10 € ho an'ny mpianakavy fanampiny ary olona efatra farafahakeliny, ary
50 euro isaky ny mpianakavy manaraka.
Antony tokony hanaovanao fangatahana pasipaoro any Montenegrin:
Ny zom-pirenena dia azo ao anatin'ny 6 volana.
Ny zaza tsy ampy taona dia afaka mihatra amin'ny mpangataka fototra ihany koa.
Ny mpangataka dia tsy voatery hiala amin'ny zom-pireneny ankehitriny.
Fidirana maimaim-poana tsy misy visa any amin'ny firenena 123.
Toerana ara-jeografika tena mahasoa an'ny firenena.
Toerana mety hipetrahana.
Ny sasany amin'ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fampiharana:
Fanamarihana tsy misy firaketana heloka bevava;
Fanambarana kaonty amin'ny banky;
Data manokana sy resume fohy manokana;